बदामको नियमित सेवनले क्यान्सरबाट बचाउन देखि डायबिटिज भगाउनसम्म फाइदा ! - VOICE OF NEPAL
२ माघ २०७७, शुक्रबार २३:३८
– स्वास्थ्य ब्युरो।
सामान्यतया बदामको सिजन या प्रचलन जाडो महिनामा बढी हुन्छ । घाममा बसेर बदम खाने प्रचलन बढी भएपनि बदम सधै खाँदा फाइदा पुग्छ । बदामको नियमित प्रयोगले क्यान्सरबाट बचाउन देखि तौल नियन्त्रण गर्न र डायबिटिजबाट जोगाउन लगायतका निकै फाइदा हुन्छ ।
मुटुसम्बन्धी रोगमा कमी : बदाममा विभिन्न प्रकारका ‘एन्टि अक्सिडियन्ट’ र खनिज तत्व हुन्छन्। जसका कारण हर्ट स्ट्रोक वा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्नबाट जोगाउँछ।
छालामा चमकः बदाममा हुने ‘मोनोस्याचुरेटेड फ्याट्स’ र ‘रिजर्भेट्रोल’ तत्वले छालालाई चम्किलो बनाउँछ। बदाममा पाइने पोषणयुक्त फाइबरले छालामा हुने अत्यधिक तेललाई निकालेर छालालाई नरम बनाउँछ। बदाममा छालालाई चाउरी पर्नबाट जोगाउने तत्व हुन्छ। नियमित बदाम खाँदा अनुहार लगायत शरीरका अन्य भागमा दाग आउँदैन।
सम्बन्ध ब्रेकअप किन हुन्छ ?
आज १४ फेव्रुअरी: प्रेम बाड्ने दिन अर्थात् ‘प्रणय दिवस’
अंकमालका फाइदा : सम्बन्ध मजबुत देखि रक्तचाप नियन्त्रणसम्म !
कफी र चिया पिएपछि किन फ्रेश भइन्छ ? कफीका कस्ता छन् अपत्यारिला फाइदा !
राति सुत्नुभन्दा अगाडि दूध पिउनु स्वास्थ्यको लागि रामबाण
जानिराख्नुस् मृत्यु अघिका यी ६ संकेत !